Maxaa laga fili karaa dagaalka Maqalle ciidanka ku soo qulqulaya? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Maxaa laga fili karaa dagaalka Maqalle ciidanka ku soo qulqulaya?
Maxaa laga fili karaa dagaalka Maqalle ciidanka ku soo qulqulaya?
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed wuxuu amray ciiidanka qaranka inay qadaan dulaankii ugu dambeeyay ee ololaha sharci fulinta.
Waxaan maanta ciidamada dawlada dhexe oo garabsanaya ciidamada Dawlad deegaanada oo ay ugu horayso Amxaaradu dulaan toos ah ku qaadeen ciidamada Tigray xilli uu weli dagaal ka socda nawaaxiga Makalle.
Dagaalka maanta dhaxmaraya Ciidamada dawladda dhexe iyo ciidamada TPLF way adkaan-doonta soo afjarida dagaalka maadama ay magaalada tahay magaalo Buured isla markaana ciidamada TPLF ay dhufesyo waaweyn ka sameysteen.
“Wax walba waxaa lagu sameeyaa farshaxanka milatariga. Kaliya ma ahan in magaalada oo dhan la dhex wareego oo huteelada la weeraro, meelaha muhiimka ah waa la yaqaan,” ayuu yidhi Madaxa Saadka ee Ciidamada Difaaca, Col. Shuma Obsa.
“Waxaan nahay dad mabda’a leh waxaanan diyaar u nahay inaan u dhimano anaga oo difaacayna xaqa aan u leenahay maamulkeena gobalkeena,” Hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion ayaa sidaa ku yidhi fariin qoraal ah oo uu usbuucan u diray wakaalada wararka ee Reuters.
Dunida ayaa Khamiista maanta ah isha ku heysa magaalada Maqale maadaama uu bilaabmay wajigii sadexaad gulufta milatari ee lagu qabanayo Maqalle.